Ulwazi Common - Hangzhou DryAir Unyango Co., Ltd
Vula-key Dry Room System
inkqubo sokupheliswa VOC
Production Machine, Isibonelelo
Principles Ukusebenza of Dryair Products
Iindlela of Dehumidification:
1. Ukupholisa dehumidification
Umoya lupholisiwe ukuya ngezantsi kwindawo umbethe; kwandule ke amanzi yinto enye lisusiwe.
Le ndlela iphumelela phantsi komqathango wokuba ngongoma umbethe ngu 8 ~ 10 ℃ okanye ngaphezulu.
2. ucinezelo dehumidification
cutha pholisa umoya ofumileyo zokwahlula ukufuma.
Le ndlela iphumelela xa umthamo umoya encinane, kodwa asihambelani kakuhle imiqathango umthamo umoya omkhulu.
3. Ulwelo Absorption dehumidification
Lithium chloride isisombululo sokutshiza isetyenziswa ukufunxa ukufuma.
Ingongoma umbethe kungancitshiswa ukuya ℃ -20 okanye kunjalo, kodwa izixhobo inkulu, kwaye lulwelo yokufunxa kufuneka kufakwe.
4.Wheel-uhlobo desiccant dehumidification
The Imicu yodongwe-arhente buzane hygroscopic aneentunja zilungiswa kwi Iimbaleki yobusi-like for umoya.
Ubume dehumidification olulula, owawufikelela -60 ℃ okanye ngaphantsi nge intlanganisela iingongoma ezikhethekileyo umbethe.
Le yindlela esetyenziswa yi Jierui.
NMP ufuzisela N-imethyl-2-Pyrrolidone
Ekubeni NMP uye abilayo ophezulu kunye noxinzelelo umphunga ngaphantsi lobushushu eziqhelekileyo, oko kube lula uqiniswe ngokuwupholisa ngezantsi lobushushu eqhelekileyo. Ngokutsho formula Antoine, esebenzisa iimpawu zayo, ukufunyanwa NMP iyakwenziwa ngokuwupholisa (ukuba imali ukuchacha amanzi luyanda xa gas wokomisa zeemoto iqulethe amanzi ngaphezulu).
Izinto eziluncedo ze rotors VOC yoxinaniso:
ukusebenza 1.High & ukusebenza
Ukusebenzisa zeolites dust High kunye carbons asebenzayo kunye umthamo adsorption elikhulu ivumela VOCconcentrator ethu ukuwuthabatha eguquguqukayo iintlobo ezahlukeneyo VOCs kwaye asebenze phantsi kweemeko ezahlukeneyo yokusebenza.
2.Capability zokunyanga VOCs kunye ngongoma high nokubilisa
izinto Carbon enengxaki ukunyanga VOCs kunye ephakamileyo okubila ngenxa esiphelweni ubushushu desorption. Ngokwahlukileyo koko, iimpawu rotors zethu zeolite na ukumelana ubushushu zomelele ophezulu, nto leyo yenza VOC concentrator yethu ukusebenzisa emoyeni adsorption kunye lobushushu eliphezulu.
lula VOC polymerized ngamandla obushushu (umz styrene, cyclohexanone, njl) kungenziwa ngempumelelo ziphathwe yi High-Silica zeolite.
4.Cleanability & ukusebenza nge unyango olulodwa ubushushu
rotors zethu zeolite ngokusebenzisa inkqubo calcining aye zonke izinto ezingaphiliyo kuquka iglu. Ukuxinana kwi element plane ukuba kwenzeka emva kwexesha elithile use.But, ungakhathazeki !! Le ivili le zihlambeke ngendlela efanelekileyo ukuze Susa accumulated dust.It nokuba ngcono ukuba zeolite plane lwethu iphinde isebenze yi unyango bubushushu ngokweemeko.
Izicelo imifuziselo rotors VOC yoxinaniso:
Isibonelelo / line Product kunokwenzeka phantsi kolawulo VOCs
Automotive / Iintetho umenzi painting tafula Toluene, Xylene, Esters, alkoholi
umenzi ifanitshala Steel Ukupeyinta umnquba, sesitovu
Ngcina / Magnetic tape umenzi inkqubo ngeso lenyama, iyunithi Ukucoca Ketones, Mek, Cyclohexanone, Methylisobutylketones, njl
chemicals Oli, Reactor hydrocarbon enuka kamnandi, acids Organic, Aldehydes, alkoholi
resin Synthetic / glue Maker Iplastiki, inkqubo ngamaplanga lemveliso Styrene, Aldehydes, Esters
Semi-umqhubi unit Cleaning Alkoholi, Ketones, amine
Iluncedo umbethe conversion point itafile:
9 7.1 48,2 49.7
18 12.9 64.4 90,3
19 13.7 66,2 95.9